र पीपीए प्रबन्धक, सजीलै थप्नुहोस्, हटाउनुहोस् वा उबन्टुमा पीपीए सफा गर्नुहोस् Ubunlog
अर्को लेखमा हामी वाई पीपीए प्रबन्धकमा एक नजर राख्नेछौं। अनुप्रयोग हेर्नु अघि, यो स्पष्ट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ किaPPA o व्यक्तिगत प्याकेज फाइल एक सफ्टवेयर प्याकेजि and र वितरण प्रणाली हो। यसले हामीलाई ल्याचप्याड मार्फत अन्य प्रयोगकर्ताहरूमा सिधा सफ्टवेयर र अपडेटहरू सिर्जना गर्न र अपडेट गर्न अनुमति दिन्छ। GitHub को लागी एक उत्तम विकल्प।
पीपीएले उबुन्टु प्रयोगकर्ताहरूलाई सफ्टवेयर स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ जुन आधिकारिक रिपोजिटरीमा छैन। सामान्यतया यी टर्मिनलबाट तिनीहरूको सम्बन्धित रिपोजिटरी साइनि key कुञ्जीको साथ जोड्न सकिन्छ। जे होस्, सजिलै र ग्राफिकली PPAs प्रबन्ध गर्नुहोस् हामी वाई पीपीए प्रबन्धक मार्फत पनि गर्न सक्दछौं।
र पीपीए प्रबन्धक हो नि: शुल्क उपकरण पीपीए व्यवस्थापन खुला स्रोत। यो सरल छ, यसले हामीलाई सबै आवश्यक कार्यहरू प्रदान गर्दछ र यो प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ। यो पीपीए थप्न, हटाउन वा शुद्ध गर्न प्रयोग गरिन्छ र धेरै साधारण ग्राफिकल यूजर इन्टरफेस मार्फत धेरै गर्न सकिन्छ।
1 वाई पीपीए प्रबन्धकको सामान्य विशेषताहरू
2 उबंटु र यसको डेरिभेटिभमा वाई पीपीए प्रबन्धक स्थापना गर्नुहोस्
3 वाई पीपीए प्रबन्धकको स्थापना हटाउनुहोस्
वाई पीपीए प्रबन्धकको सामान्य विशेषताहरू
जब हामी पीपीए प्रबन्धक खोल्छौं, हामी निम्न जस्तै विन्डो देख्दछौं:
यसबाट, पीपीएको आधारभूत अपरेशन्स प्रदर्शनको अतिरिक्त, वाई पीपीए प्रबन्धकलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ:
पीपीए व्यक्तिगत रूपमा अपडेट गर्नुहोस्। हामीले पूर्ण 'अप्ट-get अपडेट' चलाउन आवश्यक पर्दैन।
बनाउनुहोस् पीपीए सक्षम प्याकेजहरूको सूची तपाइँको टीम मा
आयात गर्नुहोस् हराएको GPG कुञ्जीहरू.
बनाउनुहोस् पीपीए बैकअप र पुन: स्थापना (स्वत: हराइरहेको GPG कुञ्जीहरू आयात गर्नुहोस्).
फिर्ता अपग्रेड पछि परिचालन पीपीए सक्षम गर्नुहोस् उबुन्टुबाट जब हामी उबन्टुको नयाँ संस्करणमा अपग्रेड गर्छौं, पीपीए अक्षम हुनेछ। यो सुविधा प्रयोग गरेर, PPAs जुन नयाँ उबन्टु संस्करणसँग काम गर्दछ जुन हामी अपग्रेड गर्दैछौं पुन: सक्षम छन्, अन्यलाई अक्षम बनाउँदै।
Launchpad PPAs मा प्याकेजहरू फेला पार्नुहोस्। हामीसँग छिटो खोजी भएको छ, तर यसले प्याकेजको सही मेलहरू देखाउँदैन र यो कम विवरणहरूको साथ आउँदछ। अर्को विकल्प गहिरो खोजी हो। यसले हामीलाई प्याकेजको सहि मेलहरू देखाउँदछ। खोजीमा, हामी यो पनि हेर्न सक्दछौं कि पीपीए पहिले नै प्रणालीमा थपिएको छ वा छैन, र यदि प्याकेज पहिल्यै स्थापना भएको छ भने। यदि यो पहिले नै स्थापित छ भने, संस्करण प्रदर्शित हुनेछ।
अनुमति दिन्छ पीपीए स्रोत फाइल सम्पादन गर्नुहोस्.
GPG BADSIG त्रुटिहरू मर्मत गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईं हामीलाई को संभावना को लागी उपलब्ध गराउन जाँदै हुनुहुन्छ डुप्लिकेट पीपीए स्क्यानिंग र हटाउने.
यसले डेस्कटप एकीकरणलाई समर्थन गर्दछ। सूचनाहरू, संकेतकहरू र अधिक।
कुनै पनि सम्भव कार्यहरू गर्न, यो मूल अधिकार प्राप्त गर्न प्रमाणीकरण गर्न आवश्यक हुनेछ.
उबंटु र यसको डेरिभेटिभमा वाई पीपीए प्रबन्धक स्थापना गर्नुहोस्
अर्को हामी युबन्टु र यसको डेरिभेटिभहरू, जस्तै लिनक्स मिन्ट, लुबन्टु, एलिमेन्टरी ओएस, इत्यादिमा पीपीएहरू प्रबन्ध गर्न वाई पीपीए प्रबन्धक कसरी स्थापना गर्ने र प्रयोग गर्ने हेर्नेछौं। म यस उपकरणलाई उबुन्टु १.18.04.०XNUMX एलटीएसमा जाँच्दै छु।
Y PPA प्रबन्धक उपकरण सजिलैसँग 'WebUpd8' टीमबाट पीपीए प्रयोग गरेर स्थापना गर्न सकिन्छ। स्थापना जारी राख्न, हामी एक टर्मिनल (Ctrl + Alt + T) खोल्छौं र यसमा निम्न आदेशहरू लेख्छौं:
सफलतापूर्वक अनुप्रयोग स्थापना गरेपछि, हामी यसलाई हाम्रो कम्प्युटरमा खोजी गर्न सक्दछौं वा टर्मिनलबाट निम्न आदेश कार्यान्वयन गर्न सक्दछौं (Ctrl + Alt + T):
वाई- पीपीए-प्रबन्धक ईन्टरफेसबाट, जो कोहीले पनि आफ्नो सबै पीपीएहरू सजिलैसँग र एकै स्थानबाट प्रबन्ध गर्न सक्षम हुनेछ।
वाई पीपीए प्रबन्धकको स्थापना हटाउनुहोस्
सुरू गर्न, हामी सजिलै हाम्रो सूचीबाट पीपीए हटाउन सक्छौं। हामी एउटा टर्मिनल (Ctrl + Alt + T) खोल्छौं र यसमा लेख्छौं:
प्रोग्रामबाट छुटकारा पाउन, उही टर्मिनलमा हामी लेख्न अगाडि बढ्छौं।
जस्तो कि मलाई लाग्छ कि यो लेखमा देखिएको छ, कोहीले पनि सक्छन् सजिलै एक पीपीए जोड्नुहोस् वा पीपीए प्रबन्ध गर्नुहोस् तपाईंको प्रणालीबाट। साथै तपाईं सबै Launchpad PPAs र अधिक खोजी गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यदि कसैलाई अनुप्रयोगको बारेमा अधिक जानकारीको आवश्यक छ भने, तिनीहरू सन्दर्भ गर्न सक्दछन् परियोजना पृष्ठ.
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » र पीपीए प्रबन्धक, सजिलैसँग थप्नुहोस्, हटाउनुहोस् वा उबन्टुमा पीपीए सफा गर्नुहोस्
यो मलाई अनुमति छैन
Itzy लाई जवाफ दिनुहोस्